भारित गरेर पवित्र जल (तीर्थ) कसरी बनाउने ?
SSRF द्वारा पारम्परिक चिकित्सा उपचारलाई निरन्तरता दिदै शारीरिक र मानसिक रोगहरूको उपचारको लागि आध्यात्मिक उपचारको सल्लाह दिइन्छ ।
कुनै पनि आध्यात्मिक उपचार अपनाउदा पाठकलाई आफ्नो विवेक अनुसार गर्न सल्लाह दिइन्छ ।
१. प्रस्तावना : कसरी पवित्र जल (तीर्थ) बनाउने
तीर्थ बनाउनको लागि धेरै पद्धतिहरु छन् जुन यस प्रकार छ :
शुद्ध जलमा विभूति मिलाएर तीर्थ बनाउने
भगवानको नामजप गरेर शुद्ध जललाई तीर्थ बनाउने
शुद्ध जलमा पवित्र माटो मिलाएर तीर्थ बनाउने (पवित्र माटो भन्नाले त्यो स्थलको माटो जहाँ उच्चतम स्तरको सन्त निवास गर्नु हुन्थ्यो ।)
शुद्ध जललाई आशीर्वाद दिएर तीर्थ बनाउने (यो कार्य केवल त्यो व्यक्तिद्वारा हुन सक्छ, जसको आध्यात्मिक स्तर ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुन्छ । यो स्तर भन्दा कम आध्यात्मिक स्तरको व्यक्तिद्वारा अशीर्वाद दिएको जलमा ईश्वरीय चैतन्यमा केहि वृद्धि हुँदैन ।)
सन्तको स्पर्शबाट तीर्थ बनाउने (यो तब सम्भव हुन्छ, जब सन्त जललाई स्पर्श गर्नुहुन्छ ।)
यस खण्डमा ईश्वरको नामजप गरेर कसरी पवित्र जल (तीर्थ) बनाउने यो प्रक्रियालाई वर्णन गर्ने छौं । शुद्ध जल मन्त्रको आध्यात्मिक शक्तिद्वारा पनि चार्ज (charge) गर्न सकिन्छ तर यो यस लेखको विषय वस्तु होइन । ईश्वरको नामजप गरेर सकारात्मक शक्तिबाट चार्ज गरिएको पवित्र जल (तीर्थ) आध्यात्मिक उपचार गर्नको लागि एउटा सहज उपलब्ध उपाय हो ।
२. ईश्वरीय चैतन्यले भरिएको पवित्र जल (तीर्थ) कसरी बनाउने
यसको लागि एक गिलास पानी जाहिन्छ । प्राथना गरेर शुरु गर्नुहोस् कि तपाईको नामजप अधिकतम सम्भावित एकाग्रता र भक्तिसँग होस् र नामजपको सकारात्मक ऊर्जाले पानीलाई ईश्वरीय चेतना (चैतन्य) ले समृद्ध बनाओस । त्यसपछि दाहिले हतकेलालाई गिलासको मुख माथि राख्नुहोस् । अब आँखा बन्द गर्नुहोस् र भगवानको नामजप अधिक्तम सम्भावित एकाग्रता र भक्तिसहित ३ – ६ मिनेट जपनुहोस् । यसपछि पानी, तीर्थको रुपमा प्रयोग गर्न तयार हुन्छ ।
सूक्ष्म-ज्ञानमा आधारित चित्रले ५०% आध्यात्मिक स्तर भएको व्यक्तिले भगवानको नामजप गर्दै पानीलाई चार्ज गरेको प्रक्रिया देखाउँछ ।
भगवानको नामजपबाट उत्पन्न भएको ईश्वरीय चैतन्य गिलासको मुखमा राखेको हातबाट पानीमा प्रवेश गर्दछ । ईश्वरीय चैतन्यको तरङ्ग पानीमा प्रवेश गर्दछ एवं गिलासको तल्लो भागमा घुमाउरो (spiral) प्रबाह उत्पन्न हुन्छ । यसको चारैतर्फ ईश्वरीय चैतन्य (चेतना) ले घेरिएको हुन्छ । यो ईश्वरीय चैतन्य (चेतना) गिलासबाट सबै दिशामा प्रक्षेपित हुन्छ ।
तीर्थको लाभ कति मात्रामा ईश्वरीय चैतन्य उत्पन्न भएको छ यसमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले यसको प्रबलता अर्थात गिलास भित्रको पवित्र जल (तीर्थ) को आध्यात्मिक शक्ति निर्माण गर्ने व्यक्तिको आध्यात्मिक स्तरमाथि निर्भर गर्दछ । भारित (charge) गर्ने व्यक्तिको जति अधिक आध्यात्मिक स्तर हुन्छ त्यतिनै अधिक पवित्र जल (तीर्थ) को प्रबलता हुन्छ ।
यदि भारित गर्ने व्यक्तिको आध्यात्मिक स्तर ५० प्रतिशत भन्दा कम छ भने, भगवानको नामजप गरेर प्राप्त तिर्थमा अपेक्षित आध्यात्मिक प्रबलता हुँदैन । यस्तो स्थितिमा पवित्र जल (तीर्थ) बनाउनको लागि गिलासको पानीमा SSRF को धूपबाट प्राप्त पवित्र विभूति मिलाउन योग्य हुन्छ । विश्वको जनसंख्याको ८० प्रतिशत व्यक्तिहरुको आध्यात्मिक स्तर ५० प्रतिशत भन्दापनि कम छ अत: पवित्र जल (तीर्थ) बनाउनको लागि पवित्र विभूति मिलाएर बनाउने विधि सिफारिस गरिन्छ ।
जल भारित गरि तीर्थ बनाउने विघिमा आध्यात्मिक स्तरको प्रभाव
आध्यात्मिक स्तर % मा
पानीमा उत्पन्न ईश्‍वरीय चेतना (चैतन्य) उत्पन्न % मा
*अधिक्तम ईश्‍वरीय चैतन्य (चेतना) निर्जीव बस्तुमा ६% हुन्छ उदाहरण सन्तको समाधि स्थल ।
** २% ईश्‍वरीय चैतन्य (चेतना) तीर्थमा पाउन सकिन्छ जब ४०% भन्दा कम आध्यात्मिक स्तर भएको व्यक्तिले तीर्थ बनाउँछ । यो सम्भब हुन्छ जब तीर्थ बनाउन विभूतिको प्रयोग गरिन्छ ।
यो चैतन्यले भरिएको तीर्थको उपयोग आध्यात्मिक उपचारको लागि लगाउने, छडकिने र पिउन सकिन्छ ।
सन्दर्भ लेख : ‘पवित्र पानी कसरी प्रयोग गर्ने ?‘